Miteny amin'izay mihaino Azy izy
"Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny fiangonana" - Apok. 2:29.
Tsy takatry ny saintsika izany hoe manam-pitoviana amin'i Jesôsy Kristy izany. Hain'ny Fanahy Masina ahiratra anefa ny masom-panahintsika mba hahafahantsika mahita izay tsy hain'ny masontsika ara-nofo jerena, na henoin'ny sofintsika, na takarin'ny saintsika. Fa ny Fanahy izay mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza, no manambara ireo fahamarinana sarobidy izay tsy hain'ny penina na ny feo soritana. — L, 49, 1896
Misy aina vaovao homena an'ireo rehetra izay milefitra eo ambany fanapahan'ny Fanahy Masina, mba hamerenana indray eo aminy ilay endrik'Andriamanitra efa very.
Tsy afaka manova ny tenany amin'ny alalan'ny sitrapony samirery ny olona. Tsy manan-kery ampy ho amin'izany fiovana izany izy. Ny masirasira — izay zavatra hafa avy ety ivelany mihitsy — no tsy maintsy atao ao amin'ilay koba mba hahatanteraka ny fiovana antenaina aminy. Toy izany koa, tsy maintsy mandray ny fahasoavan'Andriamanitra ny mpanota vao afaka ny ho mendrika hiditra ny fanjakan'ny voninahitra. Ny fahalalana sy ny fanabeazana rehetra azon'izao tontolo izao omena dia tsy mahavita manova ny zanaky ny fahotana efa simba ho tonga zanaky ny lanitra. Tsy maintsy avy amin'Andriamanitra no andraisana ny hery manavao. Ny Fanahy Masina irery ihany no afaka manatanteraka ny fanovana. Izay rehetra maniry hovonjena, na ambony na ambany, na manan-karena na mahantra, dia tsy maintsy milefitra eo amin'ny asan'io hery io. — COL, 96,97
Ny fo tsirairay izay nandray ny taratra mamiratr'ilay Masoandron'ny Fahamarinana dia haneho ny fiasan'ny Fanahin'Andriamanitra eo amin'ny fiteniny sy ny fisainany ary ny toetrany. Hihodina ny milina, satria tànana mahay no manisy menaka sy mampihodina azy. Hiala ny zavatra maisamaisatra rehetra rehefa mahazo menaka avy amin'ireo hazo Oliva roa ny fanahin'ny mpiasa. Hipariaka amin'ny hafa ny hery miasa mangina masina, amin'ny alalan'ny teny maneho hatsaram-panahy, halemem-panahy, fitiavana sy fankaherezana. — TFC 7:195,196.